ASA FANAOVAN-GAZETY : Roa tamin’ireo 25 mpanao fanadihadiana lalina no avy eto amin’ny orinasa | Madatopinfo
ASA FANAOVAN-GAZETY : Roa tamin’ireo 25 mpanao fanadihadiana lalina no avy eto amin’ny orinasa
Mpanao gazety 2 tamin’ireo dimy amby roapolo izay niofana sy nanao fanadihadiana lalina no avy amin’ny orinasan-tserasera Madatopinfo sy Gazette Madagascar. Vonjiniaina Claude Eric Ramanamihaja, niara-nitrandraka tamin’ny ekipa faha-9, ny vaovaon’ny fisotroan-dronono sy ny fihodikodinan’ny volam-panjakana ao anatiny no solontenan’ny Gazette Madagascar Consulting Communication. Tao amin’ny fikaroham-baovao mahakasika ny antony nampihantona ny lalam-baovaon’ny “Francophonie” izay mampitohy an’Ivato sy Tsarasaotra kosa no nahitana an’i Sahoby Mickaelle Raharisoa, izay mpanao gazetin’ny orinasan-tserasera Gazette Madagascar, indrindra Madatopinfo. Hita ao anatin’ny gazety boky Trandraka izay tantsoroky ny UNESCO Afrika, ny Ministeran’ny Serasera ary ny Holafitry ny mpanao gazety. Navoaka tamin’ny fomba ofisialy teo amin’ny Hotel Louvre Antaninarenina izy ireo ny Zoma 27 Jolay farany teo. Nanomboka ny volana Marsa teo moa ny fiofanana herinandro mikasika ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny tamberinandraikitra ka natsikafon’ireo mpihaza vaovao 25 ny lesoka sy ny lavaka amin’ny filibana amin’ny tamberinandraikitra sy ny fanaovana paiso an-kady ny harem-pirenena.
“Malette” teo amin’ny Parlemantera
Anisan’ny nahazo ny voalohany eo amin’ny fonon’ny boky ny fijalian’ireo be antitra milahatra amin’ny fisitrahana fisotroan-dronono kely izay tambin’ny fanompoam-pirenena nadritra ny fahatanorany. Nahazo ny lohatenin’ny gazety boky ny lahatsoratra navoakan’ireo namana avy any amin’ny Faritra Atsimon’ny Nosy, izay ahitana soritra fa tsy ny rano ihany no ritra fa ny vola nentina nanaovana ny tetikasa tany Ambovombe Androy ihany koa. Nahasarika ny sain’ny maro ihany koa ny fihantoan’ny fotodrafitrasa mampitohy an’ny Seranampiaramanidina Ivato sy Tsarasaotra izay noraisin’ny teratany Sinoa an-tanana tany amboalohany kanefa vao najanona ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany tao Soamahamanina dia nanjavona koa ny tohin’ny asa, ary voalaza fa orinasa tsy miankina hafa indray izao roa taona latsaka aty aoriana no hanohy izany. Ny nampihoraka ny maro tao Antaninarenina dia ny lahatsoratra iray izay mahakasika ny “malette” teo amin’ny Parlemantera.
Midika izany fa famelomana lakolosy amin’ny fanaovana tantely afa-drakotra amin’ny harem-pirenena no votoatin’ity Trandraka faha-3 ity raha momba ny kolikoly avo lenta ny tamin’ny Trandraka faha-2 izay nampiaiky volana aman-tany ny rehetra ny lohateniny amin’ny Famotsian’omby, sy ny vono olona ary ny fitrandrahana ny harena akibon’ny tany rehefa leo monina amin’ny asan-dahalo ny mponina. Vokatr’io laharana faharoa io dia nampanantena ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny kabary fifampiarahabana voalohan’ny taona teny Iavoloha fa hampiasaina ny “puce éléctronique” amin’ny omby, kanefa efa hametra-pialana hirotsaka hofidiana izy ity tsy mbola hita soritra ihany izany. Ny Ekipan’ny Madatopinfo sy ny Gazette Madagascar an’ny Consulting Communication dia mirary soa an’izy mianadahy, Claude Eric Vonjiniaina sy Mickah Raharisoa ary miarahaba ny namany 23 sy ny gazety boky Trandraka 3 amin’izao fivoahana amin’ny fomba ofisialy izao.
FISOROHANA NY ARETI-MIFINDRA: Napetraka ny laboratoara mitety vohitra
FIFANDRAISAN-DAVITRA: Hofaritana ny drafitrasa fahaiza-mitantana mikasika ny “internet”
NY TANTARAN’I MONGABAY
“MISS TOURISME MADAGASCAR”: 15 ireo hiatrika ny dingana famaranana
FARITRA AROVANA IRAY ETO MADAGASIKARA: Tandomin-doza noho ny fambolena katsaka tsy ara-dalàna
FIVORIAN’NY CCBG: Hitondra paik’ady amin’ny politika fitantanam-bola
AKANY AVOKO AMBOHIDRATRIMO: Tapitra hatreo ny fahasahiranana amin’ny rano
DRAFITRA FAMPANDROSOANA ARA-TOEKARENA IFOTONY: Kaominina 300 no ahazo tombony